Yaa masuul ka ah rayidka lagu laayay Soomaaaliya? - BBC News Somali
Image caption Dhibaatada ugu badan ee qaraxa ayaa sababa dhimashada shacabka
Image caption Qaraxyada ugu badan waxay ka dhacaan goobo shacab ay ku badan yihiin
Boqolkiiba 60 dadka ku dhintay Soomaaliya, muddadaasi labada sanno ah, waxaa "dilay Al-Shabaab, 13 boqolkiiba waxaa dhibaateeyay miliishiyaad aan la magacaabin, sidoo kale boqolkiiba 11 waxay ku dhinteen dhacdooyin lala xiriirinayo dowladda iyo kuwa la sheeyo", sida ku xusan baaritaanka Qaramada Midoobey.
Al-Shabaab Waxay "sabab u yihiin tirada dadka ugu badan" ee ku dhintay Soomaaliya. Kooxda waxay badisay weerrarada ay ku qaadaan xarrumaha ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM.
Image caption Al-Shabaab oo ka arrimisa deegaanno badan oo miyi ah, waxay weli weerar ku qaadaa xarrumaha dowladda iyo kuwa AMISOM
Ururka wuxuu sameysaa xeelado ay ku adeegsanayaan "miinooyiin, qaraxyo ismiidaamin ah, iyo dilal qorsheysan". Waxay si gaar ah u weerartaa ciidamada sirdoonka, AMISOM iyo xoogagga kale ee caalamiga ah iyo meela "shacabka ay ku badan yihiin, sida suuqyada, hoteellada, iyo maqaayadaha," sida lagu sharaxay qoraalka Qaramada Midoobey.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in 729 qof oo "Al-Shabaab ay afduubatay," Illaa 403 ka mid ah dadkaasi ayaa la sii daayay.
"Al Shabaab waxay sidoo kale masuul ka ahayd dilal qorsheysan oo loo geystay 86 qof, halka ay 46 kalena lagu fuliyay dil ku xukumeen maxkamadoodooda, muddadaasi labada sano ku dhow. Sidoo kale 70 qof oo lagu eedeeyay in ay jaawaasiis ahaayeen iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo looga shakiyay in ay baxsanayeen," Sida qoraalka lagu sheegay.
"illaa 71 ka mid ah dadka la dilay waxaa la hor geeyay goobo la isugu keenay shacab".
Militariga dowladda, booliska Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada, sida "Puntland iyo Jubaland", iyo sidoo kale sirdoonka iyo laamaha amniga ee dowladda ayaa ku lug lahaa dhammaan dhacdooyiinkaasi shacabka ay ku dhinteen .
Image caption Shaxda tirada dadka dhintay iyo kooxda lagu eedeeyay
"Militariga wuxuu ku lug lahaa illaa 65 dhacdo oo sababay 85 dhimasho iyo 60 dhaawac ah," ayaa ku qoran warbixinta laga soo saaray baaritaanka Qaramada Midoobey ee lagu eegay dhibaatada ka dhalatay colaadda Soomaaliya, labaddii sano ee ugu dambeeyay.
UNSOM waxay diiwaan gelisay "lix dagaal oo u dhexeeyay xoogagga dowladda in ay sababeen geerida 10 qof iyo 13 dhaawac ah". rabshadahaasi badankooda waxay ka dheceen Muqdisho, Jowhar iyo Beled-Xaawo.
Muddadaasi labada sanno gudahood ah, UNSOM waxay sheegtay in ay diiwaan gelisay 63 jeer in xuquuqda aadanaha ay ku xadgudbeen ciidamada sirdoonka ee NISA, sida in ay geysteen "dilal sharciga ka baxsan, jirdil, xarig aan kala sooc lahayn, iyo xakameynta xurriyatul qowlka iyo isu imaatinnada nabadeed".
"Waxaa arrimahaas qeyb ka ahaa, dhimashada 10 qof oo shacab ah iyo saddex dhaawaca, oo sabab u ahaa adeegsiga awood xad dhaaf ah ama rasaasayn aan kala sooc lahayn oo ka dhacay goobaha dadwaynaha."
Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in ay jirto "Caqabadda weyn oo ka dhalatay dhibaatada ay geystaan ciidamada aan AMISOM ka amar qaadan in la diiwaan geliyo", taas oo ay hareysay aqoonsi la'aanta mararka qaar, ciidamada AMISOM iyo kuwa aan ka tirsanayn.
"Laga soo billaabo Janaayo 2016 illaa Oktobar 2017, geerida 95 qof iyo dhaawacday 83 kale, sidoo kale laba goor oo kufsi wadareed ah iyo isku day kufsi ayaa lala xiriirinayaa AMISOM", sida baaritaanka lagu ogaaday.
Illaa 36 askeri oo ka socda Ugandha ayaa lagu eedeeyay in ay masuul ka ahaayeen dhimashada ugu badan oo ah illaa "38 qof gaareysa iyo 25 dhaawac ah".
Sidoo kale Itoobiya ayaa ku xigtay oo loo aaneynayaa geerida 25 qof iyo dhaawaca 15 kale, waxaana ku xiga Burundi oo lagu eedeeyay dilka 14 qof iyo dhaawaca 11 rayid ah.
Inta ugu badan "dhibaatada ay AMISOM geysatay" waxay ka dhasheen rasaaseyn aan kala sooc lahayn oo ay rideen xilliyo lagu weeraray qaraxyo.
"Tan iyo 2016-kii, Ciidamada Kenya ee aan AMISOM ka tirsanayn waxay qaadeen duqeymo aaysan amrin ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika."
Maqal Yaa gacanta ku haya ammaanka Muqdisho?